मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्षमा एमाले विजयी -3ghumti
२०७९, जेठ ११ गते बुधवार
# प्रहरी महानिरीक्षक
# नारायणदत्त पौडेल
# डिआईजी बसन्तकुमार लामा
# ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
# नविन बैंक
# म्युजिक भिडियो
# अबिरल मायाको कोसेली
# स्थानीय तह चुनाव
# बंगलादेश बैंक
# काठमाडौँ अपडेट
# सशस्त्र प्रहरी जवान पद
# सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक
# कर्मचारीको तलब
# तलब वृद्धि
# सरकारी कर्मचारी
# प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
May 25 2022 | २०७९, जेठ ११गते
मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्षमा एमाले विजयी
बैशाख ३१, २०७९ शनिवार १२:५६ बजे
मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका कान्छा घले निर्वाचित भएका छन् । उनले ८६१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् ।
उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका छिरिङ ओङ्मा गुरुङले ७१९ मत प्राप्त गरे । यस्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छिरिङ धावा गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । उनले ७४४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रिन्जेन ध्वर्जे गुरुङले ७१९ मत प्राप्त गरे। मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा कूल तीन हजार ५३५ मतदातामध्ये एक हजार ६५७ मत मात्रै खसेको थियो ।
नासों गाउँपालिकाको मतगणना जारी रहेकोले आज साँझसम्ममा गणना सकिने अपेक्षा गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधीश पुनाराम खनालले बताए । उक्त गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गठबन्धनअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायम रहेको उनले बताए । उपाध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनकै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अग्रता कायम रहेको छ ।
मनाङमा ६२ दशमलव ६० प्रतिशत मत खसेको छ । कूल ६ हजार ४९६ मतदाता रहेकोमा चार हजार ७७ मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत खनालले बताउनुभयो । सबैभन्दा धेरै तीन हजार ५३५ मतदाता रहेको मनाङ ङिस्याङमा एक हजार ६५७ मत अर्थात ४६ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै मत खसेको हो ।
नासों गाउँपालिकामा एक हजार ८०२ मतदाता रहेकोमा एक हजार ४९६ मत अर्थात ८३ दशमलव ०१ प्रतिशत मत खसेको छ । चामे गाउँपालिकामा ७११ मतदाता रहेकोमा ६१० मत अर्थात् ८५ दशमलव ७९ प्रतिशत मत खसेको छ । नार्पाभूमि गाउँपालिकामा ४४८ मतदाता रहेकोमा ३०४ मत अर्थात ६७ दशमलव ८५ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
१५ देशमा संक्रमण फैलिएको मंकीपक्स यूएईमा पनि देखियो
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको पारिश्रमिक बढ्यो
काठमाडौंका २७ वटा वडाको मतगणना सकिँदा, माओवादी निल
प्रहरी र प्रहरी-परिवारलाई सशस्त्रको १० सुविधा
नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब कति बढ्ने ?
सशस्त्रमा बढुवाका लागि ३ दिने सूचना
उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरे वापत प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्‍यो १३ प्रहरी अफिसरलाई सम्मान
मतपेटिका लुटेर खेतै खेत भाग्ने प्रहरी खोरमा
काठमाडौँ सकियो झन्डै ७० हजार मतगणना, कसले कति पाए ?
बालेन साह पचास हजार नजिक, अरुको कति पुग्यो ?